5 Hay'adaha Cilmi-baarista ee ugu Weyn
1. Machadka Shanghai ee Cilmi Baarista, Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska
2. Xarunta Tiknoolajiyadda injineernimada ee gobolka Henan Microcrystalline Oxide
3. Xarunta Tiknoolajiyadda ee Henan
4. Zhengzhou Fine Ceramic Engineering Xarunta Teknolojiyada
5. Zhengzhou Oxide Powder Engineering Technology Xarunta
Waxaa jira qolka falanqaynta kiimikada, qolka baaritaanka waxqabadka jirka, shaybaarka howsha iyo shaybaarka arjiga. Nidaam cilmi baaris iyo horumarineed oo leh astaamo badan oo alumina ah ayaa lagu sameeyay qalab iyo habab dhameystiran.
Qalabka R & D ee Sare
1. mikroskopk elektaroniga elektaroonig ah
2. Jarmal Sympatec Laser Spele Sizer
3. Dusha sare ee xawaaraha sare iyo falanqeeyaha aperture
4. Mashiinka foorarsiga ah ee dhoobada dhoobada ah
5. 1700 ℃ tijaabada dhoobada dhoobada ee foornada korontada
6. Mitirka cufnaanta otomaatiga ah
6 Qaybaha ugu waaweyn ee cilmi baarista cilmiga
1.Shanghai Institute of Ceramics, Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska
Machadka Cilmi-baarista Refractory ee Luoyang ee Sinosteel
Machadka Cilmi-baarista Shiinaha iyo Mashiinka
4.School ee Qalabka Injineerinka, Jaamacadda Teknolojiyada Henan
5.Shanghai Baosteel Machadka Cilmi-baarista
Iskaashiga dhinacyadaan ayaa sii horseedaya horumarka warshadaha waxayna siisaa taageero farsamo oo xoog leh horumarka waara ee Kooxda YUFA.
YUFA had iyo jeer waxay ku adkeysaneysaa in dhammaan badeecadaha la iibin karo oo keliya ka dib marka la maro kormeerka tayada. YUFA waxay leedahay sheybaar baaris tayo xirfadeed u gaar ah iyo shaqaale baaris tayo leh. Laga soo bilaabo alaabta ceyriinka ah ee geleysa warshadda, dhalaalida foornada, alaabooyinka hordhaca ah ee la dhameeyay, jajabinta, alaabada ugu dambeysa ee ka baxday warshadda, YUFA waxay sameysaa kormeer iyadoo la raacayo qiyaasta kala duwan oo lagu daray heerarka kormeerka ee shirkadda. Tirada ugu yar ee kormeerka waa 10 jeer, ugu badnaanna wuxuu ka badnaan karaa 40 kormeer.
Xusuusin: marka dufcaddu ka badan tahay 20 tan, sampling-ka waxaa lagu fuliyaa qayb ahaan.
Alaabooyinka ka baxsan warshad waa in lagu baaraa iyadoo loo eegayo heerarka. Haddii walxaha oo dhami buuxiyaan shuruudaha farsamo, dufcadda wax soo saarka ayaa u qalma. Inta lagu jiro kormeerka tayada iyo kormeerka, badeecadaha la kormeeray waxay u kala baxaan noocyo cabbirka walxaha kala duwan. Si aan kala sooc lahayn u xulo cabir qayb ka mid ah sampple iyaga ka mid ah.